Orchard Apple | February 2020
Ugu Weyn Ee Orchard Apple
Mid ka mid ah noocyada caanka ah ee geedaha tufaaxa, kuwaas oo miraha bislaadaan xagaaga, waxaa lagu magacaabi karaa Mantet kala duwan. Waxaa la naqshadeeyey janneylaha Canadian-ka ee 1928-dii, oo ay ka samaysay dabeecadda dabiiciga ah ee noocyada kala duwan sida Moscow Grushevka. Laakiin, waxa fiican ee ku saabsan noocan ah ee geedka tufaaxa, waa maxay faa'iidooyinka, ma jiraan wax khasaare ah, ama ma jiraan wax khaas ah oo lagu daryeelo geed geedo ah?
Haddii aad rabto inaad haysatid noocyo kala duwan oo jiilaal ah oo tufaax ah oo ku yaal beertaada oo fiicnaan doona oo kaliya muuqaalka, laakiin sidoo kale dhadhanka, isla markaana waxay leeyihiin sifooyin wanaagsan oo kale, ka dibna waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa Welsey kala duwan. Aan ka hadalno faahfaahin dheeraad ah. Qeexida noocyada kala duwan Waxaa suurtagal ah in aad waligaa aragtay tufaaxan quruxda badan, oo soo jiidata muuqaalkiisa oo si fudud "miiskaaga" aad ku weydiisato miiskaaga, dambiil miro.
Waa maxay sababta uu kubbadu u jilicsan yahay oo uu u cuno liisho: waxa la sameeyo
Basasha qurxinta: beeritaanka, sii kordhaya, sifooyinka daryeelka
Kala duwanaanshaha baradhada Princely "Rogneda": sharaxaadda kala duwanaanta, astaamaha, sawirrada
Waa waxtar leh in la ogaado hostes kasta: waqtiga kaydinta ee baradho
Waxkaqabashada toonta ka hor iyo ka dib marka biqilka. Isticmaalka herbicides iyo jeermisyada kale
Geedo yaanyo ku dhinta haddii shuruudaha sii kordhaya la jebiyo - dhirta daciifay waxay ku dhacaan cudurro faafa oo dhakhso ah. Haddii aad ogaato in waqti geedo waa jiran oo dhakhso ah qaado tallaabo, geedo badbaadi karaa. Waxa la sameeyo si ay u shaqeeyaan ninkii beerta sii kordhaya ee geedo sii kordhaya maaha wax aan micne lahayn? In maqaalka la soo jeediyey waxaan ka hadli doonaa sababaha cudurada dhirta dhalinyarada, iyo sidoo kale sida loo ilaaliyo geedo cudurada iyo si habboon u qabanqaabiyaan daryeelka iyaga. Read More
Yaanyada la doorto "Boqollaal Poods": sawir, astaamaha iyo sharaxaada kala duwan, sawir midhaha, yaanyada
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Orchard Apple 2020